In kastoo ay jiraan qaabab badan oo videos laga helo suuqa laakiin, MP4 waa dhex joogaa iyaga ugu fiican. YouTube waa meeshii aan fursaddan si ay u geliyaan kuwa dhan videos nooc ka heli kartaa. Laakiin YouTube leeyahay MP4 sida qaab rasmi ah u geliyaan videos. In kastoo ay sheegay in ay geliyaan MP4 Video, mararka qaar halka koombiyuutarka, waxaan ku guuldareysato inay geliyaan MP4 formatted video in YouTube ay sabab u tahay codec aqlka ama qaabeynta kala duwan. Waxaan sidoo kale loo baahan yahay mararka qaarkood in la saxaa naga video ka hor inta uploading on YouTube. Maqaalkan waxa aan kuu sheegi doona sida loo edit aad video, loogu badalo qaab MP4 YouTube taageeray oo geliyaan si ay u YouTube in wado banaan sahlan oo ka kaaftoomi.
Qeybta 1: Iska yaree / Dalag / Edit / Beddelaan MP4 ka hor inta
Qeybta 2: geliyaan MP4 in YouTube
Qeybta 3: Waa maxay qaababka ma YouTube Support?
Sida aan ognahay YouTube ma taageeri qaabab oo dhan, waxaad u leedahay in aad xaalkaa video ka hor uploading. Si aad xaalkaa iyo badalo video ah qaab sax ah, waxaad u baahan tahay Wondershare Video Converter Ultimate. Waxaa laga heli karaa internetka oo aad kala soo bixi kartaa lacag la'aan ah.
Tani waa software ugu fiican, oo ay ku jiraan 30x dhakhso awood diinta video. Waxay leedahay guud ahaan awood diinta ee 159 qaabab. Had iyo goor way u cusbooneysiin ay software by qaab video socda oo waa software ugu user-friendly ah. Oo weliba waxa ay leedahay muujinta a in wareejin karaan wax video cable USB aan. Sidoo kale waxaad si fiican u abuuri karaan gurigaaga video keligaa. Wondershare Video Converter Ultimate Ayaa soo socda hawlaha aasaasiga ah.
• goo, darsamaan, Dalag, Special Raadka
• beddesha, Watermark, Cinwaan
• Saamiga Change Aragti, Volume
• dhalaalka, Saturation, bedelkeeda
• Deinterlacing, Grayscale, Iyo qaar kale!
Tallaabada 1 Sida loo jar / Dalag / MP4 Edit la Wondershare Video Converter Ultimate
Ka dib markii tallaabooyin waxaa halkaas si uu idiin tuso sida loo edit aad video isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate.
Ku dar Video Waxaad doonaysaa in Edit
Ku rakib iyo Orod aad Wondershare Video Converter Ultimate.
Riix kasta "Add Files" badhamada ama "Jiid iyo dejinta" files ka aad gudbiso browser (Jaantuska 1).
Ka dib markii gujinaya "Add Files" a window yar oo furan (Jaantuska 2).
Dooro file MP4 iyo guji "fur"
Haddaba waad arki kartaa video in software
Wixii edit aad video, guji "Edit" button
Hadda daaqad editable muuqan meesha aad si buuxda u kartoo kartaa videos
Waxaa jira shan isha ugu weyn ee suuqa kala this
Jar / Goo Video
From "jar" aad jari karaa wax video clip u samaynaysaa gaaban ama boodi clip kasta oo ka video
Haddii aad rabto in aad wax badbaadiyo clip gaaban, aad gacanta ku qori kartaa bilowdo iyo dhammaadka wakhtiga sanduuqa kooxda (ama)
Dooro dhererka aad la doonayo ee clip ka line mar, oo dhererkeedu wuxuu la soo xulay ay ka muuqan doonaan midabka cagaaran
Sida sawirro kale oo aad noola kartaa wixii video
Wixii lana siii aad video, dooro "Adujst"
s Guji "Dalag" icon
Sanduuqa A cad ka dhex muuqan doonaa Kulanka Xiisaha video
Waxaad resize karaa sanduuqa in natiijada aad doonayso inaad
Waxaad ka arki kartaa jir ah ka dib markii ay yaryihiin click on "qabtay" button
Haddaba fursadaha edit dheeraad ah riix "Saamaynta"
Bakaylaha aad qaban karto wax badan oo kale
Laga soo bilaabo Watermark waxaad ku dari kartaa qoraalka sida watermark
In "Cinwaan" waxaad ku dari kartaa Cinwaan.
Marka aad dhamaysid tafatirka click on "OK" button
Edit aad video ka dib, waxaad ka arki kartaa faahfaahinta file caga.
Tallaabada 2 Sida loo Beddelaan MP4 in YouTube
"Wondershare Video Converter Ultimate" Barayaa pre modified qaab MP4 in si gaar ah loo isticmaalo YouTube video.
Sidaas awgeed, waxaan xulo qaab MP4 YouTube sida wax soo saarka video
Dooro "Qaabka wax soo saarka"
Dooro "YouTube Video"
Qaab kani waxa uu isticmaalaa heerka H.264 video codec iyo Audio codec: AAC isticmaalo YouTube
Hadda Ugu danbayntii waxa aanu, riix "Beddelaan" iyo video looga baaraandegi doonaa jiraan tafatirka
Hadda waa markii si ay u geliyaan aad MP4 qaab video in YouTube. Waxaad dooran kartaa in aad geliyaan MP4 in YouTube ka computer ama ka mobile by laguugu sahlo.
Habka 1: geliyaan MP4 in YouTube ka Computer
Iyadoo uploading video ay u YouTube, waxaad u leedahay in raac tallaabooyinkan fudud. Waxaad MP4 video formatted on your computer. Hadda gasho YouTube la adiga kuu gaar ah xisaabta Gmail. Si aad u hesho ogolaansho si aad u geliyaan video cusub, ka dibna aad xisaabta laguu soo leexin doonaa channel ah.
Open iyo Log
Log in aad xisaabta
Laga soo bilaabo geeska sare xaq u dooro "Upload" button
On suuqa kala socda, dooro file badaley waxaan xaalkaa iyo abuuro hore arrow (iftiimiyay) button la isticmaalayo
Waxaad kale oo jiidi karaan jeedi file ku riday sanduuqa in
Hadda aad file bilaabayo koombiyuutarka ee server YouTube
Iyadoo uploading aad gudbiso, waxaad buuxin kartaa dhammaan macluumaadka la xidhiidha faylka
Marka aad file waxaa uploaded, ka dibna riix "naadiya" button
Hadda ka dib markii ay ku dhameysteen kaalinta koombiyuutarka, waxa aad la isugeeyey maamulaha video ah, halkaas oo aad dhammaan video ku urursan doonaa, oo wax samayn kartid
Habka 2: geliyaan MP4 in YouTube Video laga Mobile
Waxa kale oo aad la kulmi kartaa in ay geliyaan aad video ka mobile aad.
Waxaad u baahan tahay oo kaliya raacaan nidaamka.
1. Tag app YouTube ka qalab dukaamada aad. Saxiix ee ka dhamaadka. (Haddii aad isticmaalayso YouTube app markii ugu horeysay).
2. Haddaba tag in app, ka screen guriga, ka dibna dooro ikhtiyaarka menu adigoo riixaya icon YouTube ah.
3. Halkan waxaad ka heli doonaa fursad u Upload on this menu, taas oo loo baahan yahay si ay u geliyaan aad MP4 video ka mobile.
4. Hadda waxaad ku sugan tahay bogga Upload ah.
5. Hadda halkan aad xulan video MP4 ka qalab aad ka, oo guji 'dooro' ka qalab aad.
6. Ku buuxi horyaalka ee aad MP4 video, sharaxaad aad video, gaarka ah video iyo sidoo kale Tags aad video ay u baaraan video on search engine.
Halkan waa sawirka ka kooban macluumaadkan,
Hadda 7. qalabka aad ku tusi doonaa waqtiga koombiyuutarka iyo macluumaad kale. Cabbirka guud ee MP4 video, magaca video, magaca loader kor u, boqolkiiba uploading iwm
Sidaas dambeyntii aad hesho MP4 video on YouTube, iyadoo la isticmaalayo mobile YouTube ilaa loader. Waxaad gali kartaa video meel kasta, waqti kasta oo ka qalab mobile.
Ku dhowaad dhammaan noocyada videos waxaa taageera YouTube. Laakiin qaabka ugu fiican waa MP4.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa kale oo jira qaar ka mid ah qaabab in aad isticmaali karto si aad u geliyaan video on YouTube. Halkan dhan magaca qaabab, hoos waxaa ku
MOV: Birta-Oxide Arrestor
MPEG4: MPEG-1 waxaa laga helaa file .DAT ah ee video CD ah
MP4, weelka multimedia
AVI: weelka (madfac, kaas oo awood u nooc kasta oo riixo in la isticmaalo)
Wmv: Windows Media Video (Eeg ASF)
MPEGPS: Waa qaar ka mid ah qaab hoose oo ku dhow oo aan la garaneyn
FLV: Flash video (encoded in ay sii wadaan in animation flash a)
3GP: qaabka video ugu caamsan ee taleefannada gacanta
WebM: format Web taageeray
Sidaas halkan waa warbixin buuxda sida aad u geliyaan MP4 video on YouTube si xor ah. Rajaynaynaa in ay kaa caawin doonaa waxyaabo badan oo aad u geliyaan MP4 video on YouTube.
> Resource > MP4 > Sida loo geliyaan MP4 in ay si xor ah YouTube